Lammiileen Itoophiyaa 74 Afrikaa Kibbaatti fuulleffatan Keeniyaa keessatti too'annaa jala oolan - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Lammiileen Itoophiyaa 74 Afrikaa Kibbaatti fuulleffatan Keeniyaa keessatti too’annaa jala oolan
Kanniin beelaafi dheebuun bosona keessatti hube gara hospitaalaatti geeffamaniiru
Baqachuunis lammiilee Itoophiyaatiif aadaa ta’eera. Akka waan qe’ee isaanii gadi lakkisanii bayuun kophaa isaatti kufaatii hintaanee, daandii baqaa irratti dararaa hadhaayaa dhadhamaa jiraachuu isaaniiti kan hedduu nama gaddisiisu. Oduun baqattoonni Itoophiyaa galaanatti dhidhiman, bineensaan nyataman, gammoojjii keessatti dhuman jedhu lammiilee biyya sanii qofa osoo hintaane oduu addunyaan hundi quba qabuudha. Kan daran nama yaachisuufi nama gaddisiisu lammiileen biyyattii sanii biyyootuma ollaa keessattis akka nama yakka hojjateetti admsamuu, saamamuufi gidiraa sadarkaa addaddaaf saxilamuu isaaniiti.
Oduun har’a Keeniyaa irraa dhagayame, baqattoonni Itoophiyaa 74 too’anna jala ooluu isaanii mul’isu, kanuma mirkaneessa. Akka oduun Naayroobii irraa dhagayame addeessetti baqattoonni itoophiyaa seeraan ala keeniyaa seentan kan jedhuun bosona isaan itti dhokatan keessaa poolisan kan guuraman. isaan qabaman keessaa diddamni, kanniin beelaafi dheebuun du’aafi jiruu jidduu seenanii turanis gara Hospitaalaatti geeffamuu isaaniiti kan gabaafame.
Lammiileen Itoophiyaa kunniin imalli isanii gara Afrikaa Kibbaati fuulleffachuu isaaniiti kan hubatame.
Baqattoonni kunniin Ebla 14 mana murtetti akka dhiyataniidha kan gabaafame. Seeraan ala dachii Keeniyaa, biyyuma ollaa tana, irra ejjachuu, akkasumas mootummaa Itoophiyaatiifi hiyyummaa baqachuu ta’uuf deema jechuudha yakki isaanii. Balleessaan itti argame taanaan hidhaa baatii hedduutu isaan eeggata. Biyyoota biroo heddu keessatti seeraan ala, woraqaa barbaachisuun alatti, biyya tokko keessa osoo socho’an argamuun balaan inni fidu biyyuma irraa dhufanitti deeffamuudha. Biyyoonni Afrikaa heddu imala baqattoonni daangaa biyya isaanii qaxxaamuruun gara Afrikaa Kibbaatti godhan akka yakka guddaatti ilaaluun baqattoota hidhaa hanga woggaa 3 gayuun adabuun waan baratame ta’eera.
baqa gara afrikaa kibbaatti
Previous articleJaalalli dhugaa qabxiilee 10 kanniin ufkeessatti ammata
Next articleThe Guardian: Ethiopians talk of violent intimidation as their land is earmarked for foreign investors